Tonian-dahatsoratra Maleziana Miatrika Fiampangana Heloka Antserasera Noho Ny Fandefasana Lahatsary Mitsikera Mpampanoa Lalàna · Global Voices teny Malagasy
Tonian-dahatsoratra Maleziana Miatrika Fiampangana Heloka Antserasera Noho Ny Fandefasana Lahatsary Mitsikera Mpampanoa Lalàna
Voadika ny 08 Jona 2017 5:04 GMT
Vakio amin'ny teny English, polski, Español, English
Pikantsary tamin'ny lahatsary YouTube nalefa tao amin'ny fantsona KiniTV, lahatsary momba ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ilay mpanao politika Maleziana nitsikera ny filohan'ny fampanoavana ao amin'ny firenena.
Mpiasa ambony ao amin'ny tranonkalam-baovao tsy miankina roa ao Malezia no miatrika fiampangana heloka antserasera noho ny famoahana lahatsary misy ilay mpanao politika mitsikera ny lehiben'ny fampanoavana ao amin'ny firenena.
Niampanga ny KiniTV sy ny lehiben'ny tonian-dahatsoratry ny Malaysiakini Steven Gan ary ny Filoha Tale Jeneraly, Premesh Chandran ho nanitsakitsaka ny Lalànan'ny Fifandraisana sy ny Media Marolafy 1998 (CMA) ny governemanta, lalàna manameloka ny “fampiasàna fitaovana tambajotra tsy araka ny tokony izy amin'ny alalan'ny fampitàna votoaty manafintohina, mandrahona, vetaveta, diso sy tsy mendrika ary ny hanorisory, hanitsakitsaka sy handrahona olona hafa no tanjona “.
Mikasika ny lahatsary KiniTV nalefa tamin'ny 27 Jolay 2016, ahitana mpanao politika mitsikera ny biraon'ny mpampanoa lalàna noho tsy fahombiazany mamantatra ny andraikitry ny praiminisitra ao amin'ny firenena mikasika ny raharaha mahasaringotra ny 1MDB, bankim-panjakana momba ny fampiasam-bola ny fiampangana. Niantso ny fametraham-pialan'ny lehiben'ny fampanoavana ilay mpanao politika, mpikambana taloha tao amin'ny antokon'ny fitondrana. Nalaina nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny lahatsary.
Fahitalavitra amin'ny aterineto mandefa vaovao momba ny politika Maleziana ny KiniTV. Anisan'ny Malaysiakini, vohikalam-baovao antserasera tsy miankina manana mpijery marobe izy, ary efa niatrika fanamby ara-pitsipika sy fanafihana ara-teknika taloha, izay matetika mikasika ny fitateram-baovao ara-politika.
Raha hita fa meloka, dia mety hiatrika sazy herintaona an-tranomaizina i Gan Steven sy Premesh Chandran, ary mety handoa onitra 50.000 Ringgit Maleziana (eo amin'ny 11.500 dolara Amerikana). Mety ho apetraka ihany koa ny onitra fanampiny 1000 Ringgit Maleziana (230 dolara) isan'andro raha mbola mitohy ny fandikan-dalàna aorian'ny fiampangana.
Tsy vao voalohany ny tranokalam-baovao Maleziana no nenjehan'ny manampahefana noho ny tatitra momba ny tantara kolikolin'ny 1MDB. Tamin'ny taona 2015, nampiato ny fahazoan-dàlana ho an'ireo tranokalam-baovao sasany izy noho ny fitaterana ny raharaha 1MDB.
Niteraka krizy ara-politika tany Malezia ny olana momba ny kolikoly hatramin'ny nahavoarohirohy ny praiminisitra tamin'izany, izay voampanga ho nahazo 700 tapitrisa dolara Amerikana tamin'ny alalan'ny 1MDB.
Naneho hevitra manoloana ny fiampangana an'i Steven Gan sy Premesh Chandran, nandrisika ny governemanta mba tsy hanorisory ny haino aman-jery ny Foibe Ho An'ny Asa Fanaovan-gazety Mahaleotena (CIJ):
Mitaky ny CIJ mba hofoanana ireo fiampangana ireo ary mba hitsahatra tsy hanorisory sy handrahona ny haino aman-jery sy ny mpanao gazety intsony ny governemanta. Tsy tokony hosaziana noho ny fitateram-baovao ho an'ny tombontsoam-bahoaka ireo mpisehatra eo amin'ny fampahalalalm-baovao, anisan'izany ny mpanao gazety sy ny talen'ny orinasan'ny haino aman-jery.
Nitaky ny hanovàna ny lalàna, izay matetika ampiasaina handrahonana mpitati-baovao ihany koa ny vondrona:
Mametraka enta-mavesatra amin'ny porofo ho an'ny voampanga ihany koa ny lalàna mba hampisehoana fa naka fepetra ara-drariny izy ireo mba hisorohana ilay antsoina hoe fandikan-dalàna.
Nampitandrina ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona Article 19 fa mety hiteraka voka-dratsy sy hanakana ny feon'ireo mpanohitra hafa ao Malezia ny raharaha:
Ny fitomboan'ny fampiasana ity lalàna ity mba hikendrena ny haino aman-jery tsy miankina sy izay fanakianana ny governemanta anaty aterineto dia voakasika avokoa, ary koa fanitsakitsahana mazava ny lalàna iraisampirenena momba ny zon'olombelona ho an'ny fahalalahana maneho hevitra izany.
Mampatahotra ny fitomboan'ny fampiasana ity fehezan-dalàna ity izay mitohy amin'ny Fizarana 244 (1) mba hikendrena ny vavahadim-baovao tsy miankina an-tserasera, ary azo inoana fa hiteraka voka-dratsy eo amin'ny haino aman-jery sy ny feo tsy miankina hafa ao Malezia.
Tamin'ny lahatsoratra tao amin'ny Malaysiakini, nalahelo ilay mpanoratra P Gunasegaram noho ny zava-misy fa manafika an-kerisetra an'ireo tranonkalam-baovao tsy miankina mitsikera ny governemanta ny manampahefana:
Mahagaga fa tsy nisy olona voahenjjika noho ny famokarana vaovao faikany sy vaovao mitongilana saingy misy anefa ny fanenjehana ireo izay mamoaka fotsiny vaovao mazava, vaovao tsotra sy vaovao lehibe.
Rehefa miresaka momba ny vaovao faikany ao amin'ny aterineto ny manampahefam-panjakana, ny tonian-dahatsoratry ny fampahalalam-baovao mahazatra sy ny mpanao politika ao amin'ny antokon'ny fitondrana, hita fa ny hanala-baraka ireo rehetra ao anatin'izany ny fikasan'izy ireo mba hanaovan'izy ireo fampielezan-kevitra ho azy ireo no tanjona, tsy miraharaha ny tena fandraisana anjaran'ny vavahadim-baovao sy ny bilaogy amin'ny fitaterana ny marina izay mety ho hita mihitsy tao amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra fehezin'ny fanjakana.
Fantatra fa hotontosaina amin'ny 15 Jona ny fitsarana an'i Steven Gan sy Premesh Chandran. Nampanantena hametraka fitoriana ho fanoherana ny lalàm-panorenana izy roa ho valin'izany, satria mino izy ireo fa manitsakitsaka ny fahavononan'ny firenena hanohana ny fahalalahan'ny haino aman-jery ny lalàna.